DHAGAYSO: Xildhibaan Axmed Fiqi oo si Kulul uga hadlay war kasoo baxay Dowlada Mareykanka oo ku aadan Xasuuqii Bariire..? | Garqaad News Agency
DHAGAYSO: Xildhibaan Axmed Fiqi oo si Kulul uga hadlay war kasoo baxay Dowlada Mareykanka oo ku aadan Xasuuqii Bariire..?
Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa shaaciyay in dadkii ay ku dileen howlgalkii ay ka fuliyeen 25-kii bishii August ay ahaayeen cadow hubaysan.
AFRICOM war qoraal ah oo ay soo saartay ayaa lagu sheegay in baaritaan kadib ay ogaadeen in wax shacab ah aysan ku dhiman weerarkii ka dhacay beerta ku taalla nawaaxiga Bariire.<
Fiqi ayaa tilmaamay in dowladda Federaalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha ay Twitter-dooda ay kusoo qoreen in weerarka dad shacab ah lagu dilay, haddana wax yar kadib ay ka tireen markii sida uu sheegay ay la kulmeen cadaadis dibada ah.
Gudi xaqiiqa raadis ah, oo uu hogaaminayo Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaalle oo tagey Bariire weerarka kadib ay warbixinta baaritaankooda kusoo celiyeen Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha, balse ay meel iska dhigeen kiiska oo dhan, sababtuna tahay cadaadis dibadda uga imaanaya.